Ahoana ny fiasan'ny sosona amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Graphic Design, Photoshop, Tutorials
Master Photoshop matihanina Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny vondrona, sosona ary hafetsena hafa izay hahafahanao manatsara ny fomba fiasanao miaraka amin'ity programa fampitsaharana sary tsy mampino ity, amin'ny fanatanterahana tetikasa sary miaraka amina fomba milamina sy madio. Ilaina io rafitra io mba hifanaraka amin'ny hafainganan'ny asa amin'ny tontolo tena izy.
Ny fiasana amin'ny fomba milamina dia mety ho iray amin'ireo toetra tsara indrindra amin'ny mpamorona rehefa miditra amina tetikasa vaovao, ny fitadiavana ireo singa amin'ny endriny haingana nefa tsy very eo amin'ireo sosona an'arivony dia mety ho mpiara-miasa akaiky indrindra amintsika raha tiantsika ny tsy ho adala amin'izany. tonga amin'ny fitadiavana an'io ampahany amin'ny volavolainay io izay tsy hitantsika na aiza na aiza. Mianara miasa miaraka amin'ny sosona nomena anarana manokana ary napetraka tao anaty vondrona mba tsy ho very eo amin'izy ireo. Amin'ity lesona ity dia lazainay aminao ny fomba fiasan'ny sosona ao amin'ny Adobe Photoshop.
Ny fianarana miasa miaraka amin'ny vondrona sy ny sosona ao amin'ny Photoshop dia tena ilaina mba hahafahana mahafehy tsara ity programa famolavolana sary ity. ny fomba fiasa milamina Teboka tsara hijerena ny tsara indrindra avy amin'ireo tetik'asa an-tsary nefa tsy very ny saintsika satria tsy hiasa amin'ny sosona roa na telo foana isika, amin'ny tetik'asa sasany dia tsy maintsy hiasa amin'ny sosona sy singa an'arivony maro izay hahatonga ny fiainana tsy ho azo atao isika raha Tsy manana ny toeram-piasana voalahatra araka ny tokony ho izy izahay.
Hanombohana vondrona sy sosona ao amin'ny Photoshop tsy maintsy ataontsika ireto dingana manaraka ireto:
Lazao ireo sosona
Mamorona vondrona ary omeo anarana ireo
Mariho ny sosona manan-danja indrindra amin'ny loko
Ny zavatra voalohany hataontsika alohan'ny hananganana vondrona sy sosona dia manapa-kevitra hoe firy ny singa hanana ny volavolantsika. Ohatra, raha manana endrika sy sary ny volavolainay hamorona vondrona roa izahay: iray ho an'ny lahatsoratra ary iray ho an'ny sary.
Amin'ny ohatra ao amin'ny sary etsy ambany dia afaka mahita kisarisary kely miaraka amin'ny ampahany amin'ny volavolainay ary ny sosona sy ny vondrona izay tsy maintsy anananany mba handaminana ny sehatr'asa. Soso-kevitra iray ho an'ireo singa soritra, sosona iray ao ambadika, ary vondrona roa ho an'ny lahatsoratra sy ny sarin-tànana. Tsindrio ny folder izay hitantsika ao amin'ilay faritra sosona mamorona vondrona, avy eo manindry indroa izahay mba hahafahantsika omeo anarana izany.
Raha mila miloko sosona ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia tsindrio ny sosona miaraka amin'ny bokotra havanana, hisokatra ny varavarankely izay ahitantsika maro loko ho an'ny sosona. Ny zavatra mety ato amin'ity ampahany ity dia ny fametrahana loko amin'ireo vondrona izay tena manan-danja amin'ny endrika, ohatra, amin'ny famolavolana boky, matetika aho dia mametraka loko maromaro ao amin'ny faritry ny ISBN (barcode) .
Amin'ny sary eto ambany dia hitantsika ireo loko avelan'ny Photoshop hametraka antsika.
Raha te-hamorona vondrona misy sosona efa ananantsika eo amin'ny faritra misy antsika isika, ny tokony hataontsika dia misafidy sosona maromaro miaraka amin'izay dia mamorona vondrona vaovao izahay mba hapetraka ao anaty ao daholo ireo sosona ao anaty vondrona iray. Ity dingana ity dia mora raisina rehefa manana sosona malalaka be izay noforoninay nandritra ny fizotry ny famolavolana lava. Alao an-tsaina ny sary miaraka amin'ny faritra maro: akanjo, vatana, jiro, aloka ... ny ampahany tsirairay dia vondrona iray ary ao anatin'ny vondrona misy sosona maro misy loko, aloka ... sns.
Vantany vao voatondrontsika tsara ny sosona rehetra, ny vondrona noforonina ary ny sosona manan-danja dia ho vonona izahay hilaza fa ny sehatr'asa misy antsika dia voadidy ara-pahaizana. Ity rafitry ny filaminana sy ny drafitra eo amin'ny sehatry ny asa Photoshop ity dia natao tao amin'ny tontolon'ny famolavolana isan'andro satria matetika dia tetik'asa sary no lalaovin'ny mpamorona maro ary ny tsirairay dia tokony ho afaka hitady ireo faritra sy singa samihafa amin'ny endriny.
Ao amin'ny tontolon'ny famoahana boky raha tsy mila mikasika ny fonon'ny boky ny mpamorona maro, ity dingana ity dia tena ilaina mba tsy ho very eo anelanelan'ny sosona sy ny sosona ary ho lasa adala tanteraka rehefa mila manova ny endrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fiasan'ny sosona amin'ny Adobe Photoshop